म किन डेलिगेट बनिन ? Globe Nepal News Portal
म किन डेलिगेट बनिन ?
म एनआरएन अमेरिकाको बिश्व सम्मेलनमा किन मनोनयन हुन सकिन?
म एनआरएन अभियानमा निरन्तर सहभागी छु । अघिल्लो बर्षको निर्बाचनमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर पदको उम्मेदवार थिएँ । थोरै मतले पराजित भएँ । भरखरै सम्पन्न भएको निर्बाचनमा समेत सो पदमा उम्मेदवार बनें । झिनो मतले पुन: पराजित नै भएँ तर पनि मेरो यो सस्थाप्रतिको लगाव रही नै रह्यो । डिसी,मेरिल्याण्ड भर्जिनियामा रहेका हरेक कार्यक्रममा मेरो सहभागिता रहेकै थियो। एनआरएन अमेरिकाको सहभागिता रहेको एभरेष्ट फेडेरल क्रेडिट युनियनको संस्थापक सदस्य बनें ,यस संस्थाबाट छरिएर रहेको पुँजीलाई संकलित गरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ र आफ्नो रकमबाट आफैंले सहुलियत दरमा ऋण लिई सानातिना काम गर्न सकिन्छ भन्ने बिश्वासका साथ त्यो अभियानका अभियन्ताहरूलाई साथ दिएं । एनआरएन अमेरिकाका बिभिन्न साधारण सभामा सहभागी बनें । नेपालमा भएको बाढीपीडितहरूको लागि कुनै पनि संघसस्थाबाट भन्दा एनआरएनए मार्फत नै सहभागी हुनुपर्ने कुरामा बिश्वास गर्दै सहभागिता जनाउन सहयोग गरें । नेपालीहरूको आफ्नो पहिचानको लागि सामुदायिक भबन र मन्दिर बनाउन एउटा अभियान बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै स्थानीय मन्दिरमा सहभागी भै त्यसलाई कसरी सबैको बनाउन सकिन्छ भन्ने अभियानमा रही रहें । नेपालीहरूले शुरूवात गरेको महापुराणहरू, नेपाल परेड डे , लगायत नेपाल र नेपालीहरूको हितका खातिर गरिने सबै काममा सहभागी भएँ ।
भरखरै सम्पन्न निर्बाचनमा कुनै पनि समुहमा नरही साझा उमेद्वार बनें,कुनै पनि अध्यक्षको तस्बीर टाँसिन तर पनि सम्मानजनक मत पाएँ। सबै मतदाताहरू प्रति म एक पटक नमन गर्दछु कि तपाईहरूको मतको म सधै सम्मान गर्दछु ।
म अहिलेको कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूबाट मेरा यावत जिज्ञाशाको उत्तर चाहन्छु साथै यो डेलिगेट कमिटीबाट पनि मेरा यी प्रश्नको उत्तर चाहन्छु । मैले एनआरएन अमेरिकाको डेलिगेट बन्नको लागि के के रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नु पर्थ्यो ? मैले मलाई मतदान गर्ने मतदाताहरूलाई के उत्तर दिऊं ?
parshuram Bhandari NRN NCC USA
प्रधानमन्त्री अाेली अदालतविरूद्ध यसरी अाक्राेश पाेखे
प्रचण्डले भने-विदेशीले वाम एकता भाँडन खाेज्दैछन
डेढ घण्टासम्म के कुरा भयाे अाेली-दाहालविचमा ?
यसरी ढाटिन देउवालाइ राष्ट्रपतिले
केपी ओलीले कडा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ
अाेलीकाे सपथमा भयाे गम्भीर त्रुटी,अब हाेला ?
एमाले सचिव ज्ञवालीले शेर्पालाइ दिएकाे शुभकामना तामाङकाे हातमा परयाे
अाेलीकाे मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्रीकाे सपथ लिन गएका इश्वर रित्ताे हात फर्किए
राष्ट्रपतिकाे पाथिभरा भ्रमण अचानक स्थगीत
अाेली भए ४१अाैं प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री देउवाले दिए राजिनामा
ओजराज उपाध्याय लोहनी विक्रम संवत २०७४ साल फाल्गुन ३ गते साँझ ४ । ५४ बजे कर्कट लग्न मकर...
वाह ! सामाजिक अभियन्ताहरु अनि नेपाली दूतावास
सुदिप पन्त अमेरिकी सरकारले २०१५ मा दिएको टिपीएस सुबिधाको म्याद आउदो जुन २४ मा सकिदैछ ।...
लोकतन्त्रप्रति कम्युनिष्टहरुको ओठेभक्ति बाध्यता
दर्शन रौनियार आफ्नो इतिहासमै पहिलोचोटी यति कमजोर भएर नेपाली कांग्रेस सत्ताबाट �...
अमेरिकामा जुग बित्यो तर बुद्धि फिरेन।
सानुवावु सिलवाल अमेरिकामा जुग बित्यो तर बुद्धि फिरेन। अमेरिकामा जुग बसेको भन्नु मात्रै...
नेपालमा न्याय अझै ज्यूंदो रहेछ
डा.मदन कुमार दाहाल / निर्वाचन पश्चात हतारोमा सरकारले विघटित संसदका सदस्यहरुको सिफारिसमा...
डा. केसीको पक्राउ र अदालत
डा. अंगराज तिमिल्सिना पुलिसको बाक्लो उपस्थितिमा हतार-हतारमा गरिएको पक्राउले डा गोविन्द...